Dhibaatooyinka batteriga ma lagu xallin doonaa nooca cusub ee macruufka 14.7? | Wararka IPhone
Jordi Gimenez | | macruufka 14, iPhone
Dhibaatooyinka batteriga miyaa lagu xallin doonaa nooca cusub ee iOS 14.7 ama miyaan sii wadaynaa inaan aragno dhibaatooyinka is-maamulka? Waxayna u muuqataa in nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka ee iPhone-keena uu sixi karo isticmaalka batteriga xad dhaafka ah ee nooca 14.6 la soo bandhigay.
Dareenkaan, oo aan eegayno qoraalada nooca ugu dambeeyay ee ay sii deysay Apple saacado ka hor, ma dhihi karno kani waa xaqiijin rasmi ah, laakiin waxaan rajeyneynaa in dhibaatada isticmaalka batteriga oo sareeya oo ay tilmaameen isticmaaleyaasha qaar.
Apple wuxuu soo saaray batteriga cusub ee MagSafe!
Waqtigan xaadirka ah iyo inta lagu jiro saacadaha ugu horeeya kadib markaan rakibo nuucaan, shaqsiyan waxaan dhihi karaa ma aanan dareemin isbeddelo badan oo arintaan ku saabsan, kiiskeyga waxaan isticmaalayaa iPhone 12 Pro Max inkasta oo ay run tahay inaan xoogaa ogaaday isticmaalka badan bilihii la soo dhaafay haba yaraatee lama buunbuunin. Laakiin waa run sidaan idhi, inaan ogaaday xoogaa isticmaal ka badan sidii ay ku dhacdo kumanaan isticmaale ah waana macquul in nooca cusub ee macruufka 14.7 kuwan lagu xallin doono, ugu yaraan waxaan rajeyneynaa sidaas.
Xaaladdan oo kale Iyadoo nooca iOS 14.6 Apple kamuu jawaabin cabashooyinka ku saabsan kororka isticmaalka batteriga in kasta oo ay run tahay in golayaasha taageerada Apple ay ururiyeen cabashooyinka isticmaaleyaal badan. Waxaan rajeyneynaa in hadda nuqulkan cusub lagu xalliyey dhibaatooyinkan waana in nooca xiga ee nidaamka qalliinka uu ku qaadan karo wax yar ka hor imaanshihiisa, sababaha kale waxaa ka mid ah inaan ku jirno bartamaha xagaaga iyo ciidaha bisha Ogosto aad ayey isugu dhow yihiin .
Hadda Waa in la yiraahdaa waa xilli hore in laga hadlo isticmaalka hoose ee nooca iOS 14.7 In kasta oo ay run tahay in aragtiyaha ugu horreeya laga wada hadli karo, waxay noqon doontaa wakhti in yar la sugo oo la sameeyo baaritaanno dheeri ah si loo sheego in isticmaalka batteriga uu ku fiicnaaday qaabkan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 14 » Dhibaatooyinka batteriga ma lagu xallin doonaa nooca cusub ee macruufka 14.7?
codsiyada qaarkood sida amazon ayaa igu soo boodaya, roganaya.
Apple ayaa dib u dhigista dib ugu noqoshada xafiisyadeeda ilaa bisha Oktoobar